July 20, 2006, 6:21 am Filed under: Uncategorized ကိုဟန်မင်းထွန်း
မမနတ်သမီးငယ်မမငယ်က လင်းကို ညီမအရင်းတစ်ယောက်လို သိပ်ချစ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ပါ။ ညီမလေးအတွက်ဆို မကောင်းတဲ့ကော်နက်ရှင်တွေကြားက အွန်လိုင်းရအောင်တက်ပြီး မေးလ်အရှည်ကြီးရေးသူပါ။
မမသီရိလေးသူကတော့ မြန်မာချတ်က ခင်ရတဲ့မမတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ထားနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသလို ခင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။
အောင်စိုးမင်း ၊ သူရိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ လင်းလက်ရဲ့ စင်ကာပူက အတော်ခင်ရတဲ့ မောင်လေး၂ယောက်ပါ။ ၂ယောက်လုံး ခင်ဖို့ကောင်းသလို သည်းခံကြပါတယ်။ စကားပြောယဉ်မွန်ပြီး ဖော်ရွေတတ်လို့ လင်းညီမလေးတစ်ယောက်ကတောင် သူတို့ကိုချီးကျူးပါတယ်။
Let me put your link @ http://myanmar-bloggers-community.blogspot.com/Thank you.
Comment by Myanmar Blogger
July 20, 2006 @ 2:45 pm Reply	Nice idea with this site its better than most of the rubbish I come across.»
Comment by robbinshood
August 19, 2006 @ 10:24 pm Reply	Nyimalay Juu Juu
Nyimalay Juu Juu yay..kogyi akhu mha di post ko read lite ya tal.. ko gyiayan ko kyi nuu mi tal.. Ko gyi Nyimalay ko khin khae tae khin min mahut ka bal har nae mha pyaung lae lo ma ya buu so tar nyimalay yone tal so tar . mhat htar naw… nyimalay yay.. kogyi lae next mhar one post tin lite mal.. wait nay naw.. nyimalay ba wa mhar aung myin mahu myar nae pyaw chwin par say lo ko gyi sutaung nay tal naw.. ma sone naing tae khin min mahu myar nae pot…..
Live is so short… but kindness is so long whatever it is and however they are.. mykindness and love is …. Forever….
Comment by poekaung
December 5, 2006 @ 9:33 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI